Tranga Manafintohina Mampirongatra Ny Ahiahin’ny Katalàna Mialoha Ny Fifidianana Manan-Tantara Momba Ny Fahaleovantena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2015 15:30 GMT
Nozarain'ilay mpanao gazety, Jaume Clotet (@jaumeclotet), ao amin'ny Twitter ny fijery ankapoben'ireo manaraka ny fifidianana :
Mety ny fandikàna vilana ny fanambaràna nataon'ny Vaomiera Eoropeana (EC) no niteraka io fitroarana io. Tamin'ny 21 Jolay, nandefa taratasy tany amin'ny Vaomiera Eoropeana i Santiago Fisas, solombavambahoaka ao amin'ny Parlemanta Eoropeana avy amin'ny Antokon'ny vahoaka manohitra ny fahaleovantena sy ny fitsapankevi-bahoaka, manontany raha toa ka ankatoavin'ny Vaomiera ny fanjakàna Katalàna mahaleotena. Tonga tamin'ny 21 Septambra ny valinteny, amin'ny teny Anglisy sy teny Espaniola, nosoniavin'ny filohan'ny EC Jean Claude Juncker. Nahagaga fa tsy mitovy ireo dikanteny roa ireo, araka ny fanamarihana nataon'i Alberto Nardelli, tonian'ny angon-dahatsoratra ao amin'ny gazety Britanika The Guardian :
Rehefa novoizina tao amin'ny tambajotra sosialy sy ny haino aman-jery ilay vaovao dia nanazava ny mpitondra tenin'ny EC fa ny teny Anglisy no tena marina, ary noho ny “hadisoana” na “hadisoan'olombelona” ilay andiam-pehezanteny fanampiny tamin'ny teny Espaniola. Andro vitsivitsy mialoha ny fifidianana, mbola nitaky fanazavana tsaratsara kokoa ny vahoaka Katalàna. Ny sasany, toy ny Mpitantana ny Fandaharan'asa Wikimedia, Àlex Hinojo (@Kippelboy) aza moa dia namantana ny bitsiny amin'ny Junker :
Salama Atoa @JunckerEU, manan-jo hahalala ny marina ny vahoaka Katalàna mialoha ny hifidianany amin'ny Alahady. Iza no mandika vilana ny fanambaran'ny EC ?
Taitran'ilay vaovao mitondra ny lohateny hoe “Fifidianana ho ao amin'ny Parlemanta Katalàna : Iza no manao hosoka ao amin'ny Twitter ?”, nangonin'ny vondrona Twitter Bots izay mikendry ny hampiharihary ny tambajotra politikan'ireo mpisandoka, ireo mpisera mavitrika amin'ny resaka politika amin'ny aterineto. Nahatratra tambajotranà kaonty spam politika goavana roa ny fikarohana. Izy roa ireo dia samy mambosy ny fanoherana ny fahaleovantena.
Fa nisy savorovoro politika nateraky ny tafatafa natao tamin'ny Praiminisitra Mariano Rajoy tao amin'ny onjapeo Onda Cero tamin'ny 22 Septambra. Nahoraka avy hatrany, niteraka fifangaroam-pahagagana, henatra, hatezerana ary fanesoana ny valinteny mitavozavoza sy tsy mirindra nomen'i Rajoy rehefa nanontanian'ny mpanentana ny onjapeo izy mba hanazava ny fanambarany teo aloha fa mety hanary ny maha Espaniola sy maha Eoropeana ny Katalàna ny fahaleovantena. Nampirongatra ny ‘memes’ amin'ny aterineto tahaka ity ambany ity izany.
Tsy nampiova hevitra ny governemanta Espaniola izay mitàna fa tsy ara-dalàna ny fiezahana hanao fitsapankevi-bahoaka anatin'ny roa taona nanovàn'ny governemanta Katalàna ny politika sy ny lalàna. Na dia teo aza ny didy navoakan'ny Fitsarana momba ny Lalàm-panorenana Espaniola hampiato ny fangatahana rehetra momba ny fifidianana dia niezaka ny hiroso sy nanao fifampidinihana miafina ny governemanta Katalàna tamin'ny 9 Novambra 2014. Natao ihany ilay andram-pifidianana tsy azo notanterahana na teo aza ny fanakantsakànana rehetra araka ny lalàna tsy hanaovana ilay adihevitra am-pahibemaso, ary nahazoam-bokatra mampisalasala : maherin'ny 80 isan-jaton'ny vaton'ny mpandray anjara no nankasitraka ny fahaleovantena, saingy marihan'ny vinavina tsy ôfisialy fa ambany ny taham-pahavitrihana (36 isan-jato)